रविलाई थुन्दा उब्जिएका गम्भीर प्रश्न : …पुलिस र सरकार झन् बद्नाम हुन सक्छ, याे देशमा जे पनि हुन सक्छ – PanchKhal Online
Home/समाचार/रविलाई थुन्दा उब्जिएका गम्भीर प्रश्न : …पुलिस र सरकार झन् बद्नाम हुन सक्छ, याे देशमा जे पनि हुन सक्छ
कसैले पोलेको वा दागा धरेको वा उजुरी गरेकै आधारमा हप्तौँ थुन्नु यति सजिलो कुरा र स्वाभाविक विषय हुदै हैन। कसैलाई थुन्नु त्यो पनि बिनाजाहेरी ?सबै कुराको प्रमाण संकलन पछि ढुक्क भए पछि बल्ल थुन्नुपर्ने भए थुन्नुपर्छ। आफूलाई सजिलोका लागि नागरिकलाई थुनिहाल्ने न्याय र मुद्दा चलाउने भन्दै? यस्तो पनि कुनै मानवीय कानुनी प्रकृया हुन सक्छ? कोही थुन्नु, थुनिनु के सामान्य हो? हुनसक्छ? यस्ता वाहियात कार्यविधि कानुनले गर्दा नै जनता कानुन मिच्न बाध्य हुन्छन् र मिचिँदै गएको हो।
…ह त्या हो वा आ त्मह त्या त्यो तय नभईकन यसरी अल्लारे तालमा यसपूर्व नै यत्रो रडाको मच्चिनुमा को दोषी हो? यो दोष कबाडी कानुनी प्रकृयाको हो। गिदी नखियाई मान्छे थुनेर हाकिमको तुज्जुक देखाउने सरकारी अधिकारीहरूमा ब्याप्त बिकृत सामन्ती संस्कारको कारणले पनि हो।
रवि (लामिछाने) को मामलामा जे भइरहेछ त्यो ह त्या गरेको आरोप हैन, दुरूत्साहनको हो । त्यो पनि भिडियोमा बोलेको आधारमा। कसैले जाहेरी लेखेको वा मृ तकले सु साईड नोट पनि लेखेको हैन। सु साईड गर्ने मान्छेको मानसिक संतुलन बिग्रिसकेको हुन्छ र त्यस्ताले भन्दैमा हत्तपत्त मान्यता कसरी पाउछ? यत्तिकै आधारमा थुनिनु सामान्य कुरा हैन, साधारण कमजोर गुमनाम मान्छे थुनिँदा त्यो अरूलाई सामान्य लाग्ला तर लाखौं समर्थक र फ्यान भएका ब्यक्तिहरू समाजमा लोकप्रिय र शक्तिशाली हुन्छन्। त्यसमा सबै बिशेष सिरियस र स्मार्ट हुनुपर्छ, फुकिफुकी कदम चाल्नुपर्छ।
काईते प्रकृयाकै बलमा काम गर्दा अहिलेका जनताले मान्दैनन्। सु साईड दुरूत्साहन गर्ने ब्यक्ति हत्यारा मानिनु हुँदैन, त्यस्तोमा दुरूत्साहन गरेकोमा तारेखमा राखेर पनि तहकिकात गर्न सकिन्छ।
रातारात गैरकानुनी ढंगमा स्टुडियोमा घुसेर, छापामार शैलीमा गिरफ्तार गरेर, बिनापोस्टमर्टम, बिनाजाहेरी, सोसल मिडियाको भिडियोकै भरमा गिरफ्तार गर्नुले यस्तो अबान्छित परिस्थिति ल्याएको हो।
यो परिस्थिति अगाडि यसरी नै बढ्यो भने शान्तिसुरक्षा नै ध्वस्त हुनसक्छ, अनि जे पनि हुन सक्छ। यस्तोमा कसैले जिस्कनु हुदैन। थुन्ने कुरा कसैका निम्ति पनि सामान्य हैन, यो असामान्य हो। वाह ! राम्रो काम भयो भन्नेहरू परपीडक र बिकृत मानसिकताका हुन्। स्व शालिकरामको मुचुल्का का ण्डले झन् गम्भीर मोड लिने देखिन्छ, त्यहॉ ठ्याक्कै ह त्या गरेको हो भन्ने देखिन्छ। यसरी ‘मिसफायर म्यासाकर’ गरिएको प्रमाणित भएमा पुलिस र सरकार झन् बद्नाम हुन सक्छन्, बचेखुचेको विश्वसनीयता सखाप हुन सक्छ। बाघको सवारी चढ्नु खतरनाक हुन्छ, ओर्लियो कि बाघले नै खाईदिन्छ।
अगाडि यदि यसमा पुलिसको अक्षमता लापरवाही र कसैको उक्साहटमा गरेको भन्ने कथं देखियो भने, गल्ती गरेको प्रमाणित भयो भने, यसरी अनाहकमा अपमानित बद्नाम गर्न थुनेको र नाराजुलुसका लागि समर्थकहरूलाई दुरूत्साहन गरेर अमनचयन खल्बलाएको कुराको अब जवाफदेहीता कसले लिने?
जनतालाई कसले औचित्य बुझाउने, सम्झाउने ? थुन्ने कुरा मिसफायर हुनेगरी कहिल्यै गर्न हुदैन। तर रवि काण्ड मिसफायर हो वा हैन हेर्न बॉकी छ। शालिकरामलाई न्याय हुनुपर्छ। उनको ह त्या हो वा आ त्मह त्या त्यो तय नभईकन् यसरी अल्लारे तालमा यसपूर्व नै यत्रो रडाको मच्चिनुमा को दोषी हो? यो दोष कबाडी कानुनी प्रकृयाको हो। गिदी नखियाई मान्छे थुनेर हाकिमको तुज्जुक देखाउने सरकारी अधिकारीहरूमा ब्याप्त बिकृत सामन्ती संस्कारको कारणले पनि हो।
पुलिस पुरातन छ, स्मार्ट पुलिस प्रणाली छैन, यस्तोमा जनताले दु:ख पाउछन् र सरकार निरन्तर अलोकप्रिय बन्छ। र, शासकीय र प्रशासनिक अस्थिरता नियमितता बनिरहन्छ।
समाजमा अपराध हुन्छन्, अपराध रोक्न सकिन्न हत्तपत्त। तर अपराधी उम्कन भने कदापी हुदैन, नभए सरकार किन पाल्ने? पुलिस स्मार्ट हुनैपर्छ, नही तो नही चलेगा!
(उपाध्याय पूर्व-सचिव हुनुहुन्छ)